Mashiinka Xashiishada ah ee Burburinta Gawaarida Gawaarida ah ee Jaban oo loo yaqaan 'DAP pellets' oo burburinaysa alaab-qeybiyeyaasha iyo Warshad | YiZheng
Ku Kiimikada Bacriminta Qafis Mashiinka Mashiinka waa in loo qaabeeyaa oo si ballaadhan loogu adeegsadaa macdanta dabiiciga ah, burburka bacriminta isku dhafan, burburka walxaha isku-darka bacriminta. Waxay ku burburin kartaa dhammaan noocyada bacriminta kiimikada hal biyo leh oo ka hooseeya 6%, gaar ahaan qalabka adag.
Muxuu yahay Mashiinka Kiimikada Bacriminta ee Cage Mill?
Ku Kiimikada Bacriminta Qafis Mashiinka Mashiinka waxaa iska leh warshad qafis oo dhexdhexaad ah. Mashiinkaan waxaa loogu talagalay iyadoo la raacayo mabda'a burburka saameynta. Marka baqashada gudaha iyo dibaddaba ay isku shaandheyn ku sameeyaan jihada ka soo horjeedka oo leh xawaare sare, maaddada ayaa laga jajabiyaa gudaha ilaa dibedda saameynta qafiska. Guri burburiyuhu wuxuu leeyahay faa'iidooyinka qaab dhismeedka fudud, waxtarka sare ee burburka, waxqabadka xiritaanka wanaagsan, hawlgalka xasilloon, nadiifinta fudud, dayactirka habboon iyo wixii la mid ah.
Ku Kiimikada Bacriminta Qafis Mashiinka Mashiinka wuxuu ka kooban yahay jir, sanduuq, koox giraangiraha jiirka, kooxda jiirka jiirka iyo laba matoorrada korantada. Markaad shaqeyneyso, mootadu waxay qafiska weyn u wadaa inuu si habsami leh u wareego. Mashiinka kale wuxuu kaxeeyaa qafiska yar si uu gadaal ugu rogo, sheyguna wuxuu galaa muraayadda jiirka hoose ee jiirka iyada oo loo marayo hopper-ka, xawaaraha sare ee biraha birta ee wareegaya wuxuu si isdaba joog ah u saameeyaa oo u jajabiyaa maaddada, si loo gaaro saameynta wanaagsan ee burburka.
Feature of Kiimikada Bacriminta qafis Mashiinka Mashiinka
(1) Kani waa midka godka qafis ee jiifka loogu talagalay cabirka dhexe.
(2) Gaar ahaan ku habboon alaabada leh adkaanta sare
(3) Waxay leedahay qaabdhismeed fudud iyo waxtarka burburka sare
(4) Hawlgal jilicsan, fududahay in la nadiifiyo, si fudud loo ilaaliyo.
Kiimikada Bacriminta Qafis Mill Machine Display Video
Xulashada Mashiinka Mashiinka Mashiinka Bacriminta Kiimikada
Hore: Bacriminta Urea Mashiinka Xashiishadda
Xiga: Caws & Burburka Xaabada